'द हन्डमेड टेल' सीजन २, एपिसोड १२ रिक्याप - समाचार
'द हन्डमेड टेल' सीजन २, एपिसोड १२ रिक्याप: पोस्टपार्टम रिग्रेसन
* चेतावनी: Spoilers अगाडि *
काकी लिडियाले वाटरफोर्डलाई दुध उत्पादनको खातिर अफरलाई घर फर्कन दिन मनाउँछ।
निक जीवित छन्, तर ईडनले उनलाई र वाटरफोर्डहरूको लागि पूर्ण नयाँ होस्ट प्रस्तुत गर्दछ।
एमिली नयाँ कमाण्डरको परिवारमा सर्छन्, र ऊ कुनै हानि गर्दैन।
गिलियडले एक विशेष क्रूर (र सार्वजनिक) तरिकामा अदन र इसहाकलाई आफ्नो बेवफाईको लागि भुक्तानी गर्न लगाउँछ।
गिलियडले प्रस्ताव गरेको सबैमा भिज्न तयार हुनुहोस् किनकि दुई सीजनमा त्यहाँ केवल एक मात्र एपिसोड बाँकी छ। (हो, हामी पनि दु: खी छौं।)
जर्ज क्राय्याचिक / हुलु
भाडाको लागि गर्भाशय
एपिसोड सेरेना (Yvonne Strahovski) मा नुहाई र उनको मिठाई बच्चा एन्जिल निकोल (FKA होली) खुवाउँदा खुल्यो। उनी खुसी छिन् अन्तमा उनको बच्चा छ, अफ्रेड (एलिजाबेथ काई) भन्दा फरक छ, जो औपचारिक रूपमा निस्सहाय र बुढो गरी रातो केन्द्रमा स्तनको दूध पम्प गर्दैछ। आन्टी लिडिया (एन डोड) सँधै चिपर छिन् र अफर्रेडलाई सोध्छन् कि उनको छेउछाउका क्षेत्रहरू के गरिरहेछन्। अर्की आन्टीले आन्टी लिडियालाई बताउँछिन् कि उनी बच्चाबाट छुट्टिएपछि अफ्रेडको दुध आपूर्ति कम हुँदैछ, तर आन्टी लिडियाले यसमा टाँसिन र भनिन् कि उनीहरूले सेरेनाको चाहनालाई पछ्याउनु पर्छ। प्रस्तावले उनलाई औंल्याएर हेर्यो र भन्छे उनले बच्चालाई सुरक्षित राख्ने वाचा गरेकी छिन्, उनलाई खानाबाट वञ्चित गर्नु सेरेनाको भागमा राम्रो प्यारेन्टि। नै छैन।
चाची लिडियाले अधिक सकारात्मक चीजहरूमा कुराकानीलाई अस्वीकार गर्‍यो, जस्तै कुन परिवारले अफर्डको गर्भाशय अर्कोमा भाडामा लिनेछ। उनको व्यवहार्य अंगहरूको लागि प्रतिस्पर्धा यति उत्साहित छ कि एक परिवारले आन्टी लिडियालाई घूस दिन पकाएको सामान पनि पठाएको छ। उदार महसुस, उनीले अफर्टलाई एक मफिन छनौट गर्न दिन्छ। उनी चुटकिलाउँछिन्, मलाई लाग्छ मैले सम्पूर्ण केक कमाएको छु, र सानी लिडियाले गर्व गर्छिन् कि गर्व केटीहरूले केहि पनि पाउँदैनन्। जब अफरलाई थाहा हुन्छ कि उनले एक ब्रान मफिन छान्छिन्, उनी मद्दत गर्न सक्दैनन् तर विडंबनाको सराहना गर्छन्।
त्यसो भए ... निक जीवित छ?
वाटरफोर्डको नयाँ बच्चाको आगमनको लागि धन्यबाद, कमाण्डर (जोसेफ फिनेस) सँग गिलियडको लागि मिडिया पोइन्ट चलिरहेको एक प्यासी नयाँ काम छ। यो एक swanky कार्यालय को साथ पूरा आउँछ, जो निक (अधिकतम मिing्गेला) उसलाई भित्र पस्न मद्दत गर्दै छ। उनीहरू कुराकानी गर्छन्, र कमाण्डरले पूरा निक लाई अभिभावकहरूले अपहरण गरेको कुरालाई एउटा ठूलो गलतफहमीको रूपमा बोलाउँछन् र भन्छन् कि ऊ वास्तवमा एक नायक हो। उनले निकलाई पनि आफ्नो विवेकका लागि धन्यवाद दिए र उनलाई भर्खरै पेन्ट गरिएको वाटरफोर्ड परिवारको चित्र झुण्ड्याउन आग्रह गरे। * आँखा रोल *
पछि वाटरफोर्डको घर, सेरेना र ईडन (सिडनी स्वीनी) बच्चा निकोलको बारेमा शोक मनाउँछिन्, र सेरेनाले उनीसँग ईडेनको बाटोको प्रशंसा गर्छिन्। खुसी, ईडेन भन्छिन् कि उनी आफ्नो एउटा हुन् र सेरेनाको प्रतिक्रियाले हामीलाई थाँहा बनाउँदछ: धैर्य र सद्गुण र बलिदान र अझै यो सबैको लागि लायक छ। अम, हामी एकदम यकिन छौं कि यो प्रस्ताव गरिएको थियो कि कसले बलिदान दियो, तर ठीक।
एक्ने दागहरूका लागि बेकिंग पाउडर
रीटा (अमांडा ब्रुगल) नयाँ कोठाको दुधको साथ कोठामा छिर्छिन् र सेरेनालाई उनीहरूको आपूर्ति कम भइरहेको छ भनेर खबर गर्छिन्। उनी आफ्ना दाँतहरू कम्मर कसेर कुकुर छिन् कि उनी जान्दछन् कि यो कसरी काम गर्दछ जब रीताले कारण बताउने प्रयास गर्दा।
त्यसो भए पछि, आन्टी लिडियाले कमाण्डर वाटरफोर्ड, निक र बच्चालाई भेट्न अफर लिन्छन्, व्याख्या गर्दै, तपाईं हामी जस्तो उत्पादनशील हुनुहुन्न। उनको पम्प प्राइम देखेर, यति कुरा गर्न। र प्राइम पम्पले यो गर्छ। त्यस क्षण कमाण्डरले निकोललाई उनको वाहकबाट हटायो, उनको पोशाकले ल्याक्टेट्स अफर ल्यायो। उनी नर्स निकोललाई अनुरोध गर्छिन्, तर कमाण्डरले अस्वीकार गर्‍यो। आन्टी लिडिया तर्कको आवाज हुन कोशिस गर्दछन् र सुझाव दिन्छन् कि उनले आफ्नी छोरीको लागि के उत्तम हो विचार गर्दछन् र उनको दुध उत्पादन बढाउनको लागि अफ्रेडलाई वाटरफोर्ड घरमा फर्कन प्रोत्साहित गर्छन्।
आश्चर्यजनक कुरा उनी बाध्य छन्, र सेरेना हो उग्र के तपाईंले उसलाई मेरो बच्चालाई छुनुभयो? उनी घर पुग्दा उनी मनमनै सोध्छे। शान्त, शान्त र संकलित, उनले जवाफ दिए कि उसले गरेन, र उनले निकोलको लागि शान्त वातावरण खेती गर्ने उनको योजनालाई विफल पार्ने आरोप लगाईन्। अन्तमा उनी जान्दछन् कि उनीसँग यस विषयको कुनै विकल्प छैन र उनीसँग लेवल यसो भन्छिन्, 'उनीसँग बच्चासँग कुनै सम्पर्क छैन, र उनी आफ्नो कोठामा पम्प गरिन्। उनको प्रतिक्रिया? आमालाई राम्ररी थाहा छ।
शहरमा एक नयाँ अफोसेफ छ
प्रस्ताव गरिएको एक मात्र चलिरहेको छैन, यद्यपि। आन्टी लिडियाले एमिली (एलेक्सिस ब्लेड) लाई उनको नयाँ घरमा स्याहार गरी र गाली गरी, 'तिमी भाग्यशाली छौ उनीहरू सहमत भए। चार जोडीले अस्वीकार गरे। तपाईं अवसरहरु को लागी भाग्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले व्यवहार गर्नुपर्छ। कमाण्डर लरेन्स ज्यादै उज्जवल छ, धेरै महत्वपूर्ण मानिस। उहाँ गिलियडको अर्थव्यवस्था को वास्तुकार मानिन्छ। एमिली अगाडिको आँगनमा हिचकिचाउँछिन् र चाची लिडियालाई बताउँछिन् कि उनी किन यस्तो महत्वपूर्ण, चतुर व्यक्तिले त्यस्तो श ** टाई दासीमा राख्छिन् होला भनेर। एक पटकको लागि, सानी लिडियासँग प्रतिक्रिया छैन।
हराएको आँखा र पूरै दृष्टिकोणको मार्थाले ढोका खोल्छ, र तिनीहरू विचलित र विचित्र सजावटमा लिँदा, कमाण्डर जोसेफ लरेन्स (ब्रैडली ह्विटफोर्ड) उनलाई अभिवादन गर्नको लागि सीढ़ीमा तल ओर्लन्छन्। एमिलीले उनको टाउको कम गर्‍यो र उनी चुपचाप खैँजाको रूखमा उनको पखेटा मुनि हेर्नुहोस् तर केही पनि भनेन। संग्रहाइहरु र गिलियड jargon को एक छोटो विनिमय पछि, उनी भन्छन्, सुपर, र ढोका खोल्यो ताकि बुआ लिडिया छोड्न सकून्। उनी डम्ब्रस्ट्रक छिन् र सोध्छन् कि श्रीमती लरेन्सले एमिलीलाई भेट्न चाहान्छन् कि उनीहरूले यसलाई इनिश गर्नु भन्दा पहिले। ऊ भन्छिन् उनी बिरामी छन् र दोहोर्याई उनलाई भन्छे, हामी ढोका ढकढक्याउनु अघि यहाँ छौं।
ऊ एमिलीमा हेरिरहेको छैन जबसम्म ऊ अर्को कोठामा हंगामा सुन्छ र मार्थामा कराईरहेछ उसको सामान नछोउन। जब उनले उत्तर दिइन् कि यो उनको मार्गमा छ, उसले समान रूपमा सोध्यो यदि उनी पिटाई मन पर्यो भने। यो कस्तो अपरंपरागत गिलियड परिवार हो।
एक्लै हुँदा, एमिलीले आफ्नो पखेटा हटाउँछिन् र उनको नयाँ वरिपरि सर्वेक्षण गर्दछन्। उनी खुला पुस्तकमा आउँछिन् र मद्दत गर्न सक्दिनन् तर यसमा हेर्नुहोस्। कमाण्डर लरेन्स उनी माथि लुक्छिन् र सोध्छन् कि उनलाई थाहा छ पढ्नको लागि सजाय के हो। जब उनी प्रतिक्रिया दिन्छन् कि यो औंला हो, उसले उसलाई भन्छन कि यो राम्रो ओएलको दिनमा पछाडि फर्किन्थ्यो। वाई।
हामी यहाँ सबै पागल छौं
पछि, एमिली उनीको नयाँ कोठामा छिन् जब अविवाहित श्रीमती लरेन्स प्रवेश गरी र उनको वास्तविक नामको लागि सोधिन्। जोसेफलाई यसो नभन कि म भित्र आएको हुँ। ऊ मनपर्दैन जब म केटीहरूसँग कुरा गर्छु, उनी शुरू हुन्छन्। उसले केहि भयानक काम गर्यो, भयानक । उहाँ सबै कुराको साथ आउनुभयो ... उपनिवेशहरू। उसले सबै कुराको योजना बनायो। उसले सबै कुरा पत्ता लगायो, र मैले भनें, 'वास्तविक व्यक्तिहरूले त्यो फोहोर खन्दछन् र यो विष हो। यो विष हो! 'उनी उन्मादी बन्छन् र जब कमाण्डर उनीलाई चुप लागी आउँछन् उनी उनीसँग लड्छिन् जब सम्म उनी उनलाई कोठामा फ्याँक्दैनन्। उसले एमिलीलाई उसलाई तल उसको घरमा पुग्न आदेश दिन्छ।
तिनीहरू खाना खाने टेबलमा बस्छन् र कमाण्डरले दुई गिलास बियर खसाल्छ र एउटालाई उसको बाटोमा धकेल्छ। उनले उनलाई भन्छन् कि उनीहरूले यस घरको गोपनीयतालाई महत्त्व दिईन्छ र जब एमिलीले आफ्नी श्रीमती ठीक छ कि भनेर सोध्यो भने, उनी जवाफ दिन्छन्, जीवनले आफूले चाहेको जस्तो तरीकाले परिवर्तन गरेन। उनी एक कला प्राध्यापक थिए। उनी सबै कुरा सुन्दर होस् भन्ने चाहन्थिन्।
यस विशेष तथ्यले उसलाई एमिलीको विगतको बारेमा अन्वेषणमा टेक्न अनुमति दिन्छ र उसले स्पष्ट पार्दछ कि उसलाई उनको क्यारियर र परिवारको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। बच्चा गुमाउनु भनेको एउटा अंग गुमाउनु जस्तै हो। तपाइँको शरीर को भाग जस्तै, उहाँ pontificates। तर तपाइँ जान्नुहुन्छ कि त्यो के जस्तो छ, पनि। के तपाईले ठीक गर्नुभयो? उनी कसरी जवाफ दिने निश्चित छैनन् र उनको आँखा राम्ररी आँसुले भरिए।
छाला को लागी बेकिंग सोडा फाइदा
त्यो साँझ, अफ्रेडको हृदय भाँचेको छ जब उसले बच्चा सुन्न थाल्यो। उनी दुधको दुधको दुई बोतलहरू भान्साकोठाबाट तल गइन् र सेरेनालाई आफ्नी छोरीको पाठा समातेर हेरिन्। ईडेनले उनलाई भान्छामा अभिवादन गरे र स्तनपान गराई दुखाई छ भनेर सोधे भने, जोड्दै, म यो महसुस गर्न कुर्दिन। स्तनपान गराउनुको मतलब ... भगवान्ले मलाई योग्य देख्नुभयो।
प्रस्ताव राख्नु अघि उनको कोठामा फर्किनु अघि, अदनले ईश्वरीय इच्छाको बारेमा एउटा जटिल प्रश्न खडा गर्छ: उसले बच्चालाई हुर्काउन चाहन्छ जुन आमा बुबाले साँच्चिकै एकअर्कालाई माया गर्दछ, के तपाईंले सोच्नुहुन्न?… यदि तपाईंसँग त्यो मौका छ भने के गर्ने? माया र बच्चाको लागि। अफरले गिलियडमा त्यो अवसर कहिले पनि पाउने छैन, तर एदेनले त्यो पहिचान गरेको जस्तो देखिदैन।
प्रस्तावले उनलाई बताउँछिन् उनीलाई निक निक प्रेम त्रिकोणको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन किनभने उनी छिट्टै जानुहुन्छ तर स्वीकार्छिन् कि यस्तो ठाउँमा दयाले भरिएको ठाउँमा ईडनले जहाँ भेट्टाउछिन् माया गर्नै पर्छ।
अर्को बिहान, निकले अफरलाई भने कि उसले ईदेन फेला पार्न सकेन र उनीहरूले समात्नको लागि केहि छोटो समय लिए। हाम्रो बच्चा धेरै सुन्दर छ। म चाहन्छु कि मैले उनलाई समातें, ऊ सुरु हुन्छ। अफर्डले भनिन् उनी पनि गर्छिन्, र उनीहरू मौनीमा भागेर समुद्र तटमा खेल्दै होलीले बालुवा खाने कोसिस गर्दा कल्पना गर्छन्। यो रोमान्टिक हो, जब सम्म कमाण्डर हिंड्दैन र निकलाई सूचित गर्दैन जब इसहाक (रोहन मीड) ले कहिल्यै उनको पारी देखाएनन्। दुई र दुई सँगै राखेर, निक उनीहरूको हातमा एक अवस्था छ भन्छन्।
कमाण्डर रिसाए कि अदन र इसहाक सँगै भागे र सेरेनालाई गुनासो गरे जब कि उनी उजाड निकोललाई भेटे। के तपाईंलाई थाहा छ यो मेरो लागि कस्तो देखिन्छ? मैले उनलाई आफूलाई उचाल्ने अवसर दिएँ। एक पत्नी, एक आमा बन्ने, वाटरफोर्ड नामको साथ सम्बन्धित छ ... एक विवाहित महिला आफ्नै स्वार्थी अभिलाषामा बढाए, उनी चिच्याए। तर सेरेना आफ्नो पराक्रममा कुनै चासो राख्दिनन् र एडेन पत्ता लगाउन भन्छिन तर उनलाई यसबाट बाहिर पठाउँछिन्। उनीसँग प्लेटमा पर्याप्त छ।
निकोल दिनभर उदासिन नै रहन्छ र जब उनी रोदिनन्, सेरेनाले उनलाई हेरचाह गर्ने प्रयास गर्छिन् र तुरुन्तै उनको बच्चाको आवश्यकता पूरा गर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्न नसक्दा अपराध र लाजमा पर्न थाल्छिन्।
पछि, अफरले निकोलको फोहोर लुन्ड्रीको गन्ध लिइरहेको छ (त्यस्ता नयाँ बच्चाको सुगन्ध जस्तो केही छैन) जब कमाण्डर भान्छामा प्रवेश गर्छन्। उनीहरूले अदनको बारेमा चिच्याट गरे र उनले अफरभेडको सामना गर्‍यो र उनी र सेरेना कहाँ आउँदा उनी कहाँ लुकिरहेकी थिई भनेर सोध्छन् परित्याग गरिएको घर उनको खोजी गर्न। उनी जवाफ दिन्छिन् कि उनी अटारीमा थिइनन् तर उनको मुटुको धडकन एकदम चर्को थियो कि उनले सेरेनासँगको युद्धको आवाज सुन्न सकेकी थिइनन्। उनले हन्ना (जोर्डाना ब्लेक) सँग उनको आश्चर्यजनक बैठकको बारेमा सोधे र उनीहरू फेरि स्क्र्याबल खेल्नको लागि छुट्टै योजनाहरू बनाउँदछन्, तर उनको झुकाव झलकले भन्छ कि उनी ट्रिपल वर्ड स्कोर भन्दा बढी चाहान्छन्।
पश्चात्ताप गर्नुहोस् ... वा अन्यथा
बिहान, रीता ऑफर उठ्छिन् र उसलाई बताउँछिन् कि एदेन भेटियो। निकले इडनसँग तर्क गर्ने कोशिश गर्छिन् र उनी गर्भवती छिन् भनेर दावी गर्थे वा इसहाकले उनलाई उनको ईच्छाको बिरूद्ध भाग्न बाध्य पारिदिए। उनी भन्छिन् उनी त्यो गर्न सक्नुहुन्न किनकि उनी उसलाई माया गर्छिन्। मलाई चाहिएको सबै वास्तविक परिवार बनाउनु थियो। गिलियडले आफ्ना सेवकहरूबाट चाहेको कुरा हैन र? उनी बिन्ती गर्दछन्। डराए, निक भन्छन् कि उनीहरूले अझै पनी बच्चा जन्माउन सक्दछन् यदि उसले पश्चाताप गर्छ र ऊ राम्रो पति नहुँदा माफी माग्छ भने। उनी उसलाई चुम्बन गर्छिन् र उनले उनलाई भन्छिन् कि उनको अघि उनको जीवन छ अगाडी, यो स्पष्ट छ कि उनले उनको प्रेमको लागि मर्न योजना गरिरहेकी छिन्।
इडन र इसहाकको परिवार एक हाई स्कूल पूलमा भेला भएका थिए आफ्ना पापहरूको लागि क्षतिपूर्ति दिन। स्टार-क्रस प्रेमीहरू भर्या .मा चढेर उच्च डाईभिंग बोर्डमा बनेका छन् र तौलमा बेर्ने छन्। कमाण्डरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको पाप त्यागेर भगवानको कृपाको लागि बिन्ती गर्दछ। उसले आफूलाई बारम्बार दोहोर्याउँछ, तर एदेन र इसहाक चुप लागेर बस्न थालिन् सम्म उसले प्रेम गर्न थाल्छ धैर्य बाइबल पद। तिनीहरू पोखरीमा धकेलेछन् र डुबाइन्छन् जबकि सबै जना डराउँदछन्।
हटाउने बिना नेल पोलिस हटाउनुहोस्
पछि, अफरले निकलाई सान्त्वना दिन खोज्यो तर ऊ तानिन्छ। अर्को, उनी सेरेनामा जाँच गर्छिन् र यस्तो भयrible्कर घटना देखेर उनी के गरिरहेकी छिन् भनेर सोधिन्। उनी आश्चर्यजनक रूपमा कुराकानी गर्न योग्य छन् र निकोलले फेरि रुनु नपरुन्जेल बाइबलका केही पदहरू बोल्छिन्। उनलाई बोतल लिन स्वयंसेवकहरु प्रस्ताव गरियो, तर सेरेनाले साना केटीलाई स्याहार गर्नु पर्छ। उनी गर्छिन् र ती दुबै आश्चर्यमा हेर्छन्।
केहि पनि थाहा छैन अब के हुनेवाला छ? उम, उही। अनुमान गर्नुहोस् हामीले कुर्नुपर्नेछ र हेर्नुपर्नेछ जब सीजन दुई फिनाले (भन्छन् कि त्यसो भएन!) हाईमेमेड कथा Hulu हिट बुधवार, जुलाई ११।
सम्बन्धित : 'द हन्डमेड टेल' सीजन २ रिक्याप्स: प्रत्येक कष्टप्रद एपिसोड
अंडाकार अनुहार र लहरी कपाल को लागी कपाल
दिमागमा आरामका लागि एक्युप्रेशर पोइन्टहरू
कालोन्जी तेल कपाल झर्ने
के कपाल खानु पर्छ तुरुन्त कपाल झर्नु रोक्न
विशेष डिनर व्यंजनहरु भारतीय
शिक्षाका लागि राम्रो विचार